Carragher oo digniin ku saabsan Van Dijk u diray Liverpool kahor inta uusan bilaaban horyaalka Premier League – Gool FM
Dajiye July 31, 2021
(Liverpool) 31 Luulyo 2021. Halyeeyga Liverpool Jamie Carragher ayaa aaminsan in Reds ay tahay inay u samirto xiddiga reer Holland ee Virgil van Dijk, oo ah daafaca kooxda.
Daafaca reer Holland ayaa ku soo laabtay si uu ugu qeybgalo kulmmada Reds markii ugu horreysay tan iyo bishii October 2020, ciyaartii saaxiibtinimo ay la ciyaareen Hertha Berlin khamiistii la soo dhaafay.
Haddaba halyeeyga reer England ee Jamie Carragher ayaa u sheegay website-ka “Liverpool Echo”:
“Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan taxaddar muujino, waxaana u malaynayaa in Jurgen Klopp uu sidaas sameyn doono.”
“Uma maleynayo inay tahay inaan filanno in Virgil van Dijk uu soo laabto Reds -na si toos ah ugu guuleysato horyaalka xilli ciyaareedkan.”
“Wuxuu la kulmay dhaawac halis ah waana inuu hubiyaa inuusan soo dedejin soo laabashadiisa, haddii uu ku soo laabto heerkiisii ​​ugu fiicnaa, waa daafaca dhexe ugu fiican kubadda cagta adduunka, taasina waa waxa ay Liverpool rabto shan ama lix sano soo socota, ee ma aha shanta ama lixda toddobaad soo socda.”
“Haddii uusan ciyaarin kulanka ugu horeeya ee xilli ciyaareedka, ma ahan dhamaadka adduunka, waxay ku saabsan tahay hubinta in Virgil van Dijk uu diyaar yahay 100%.”
Intaas kaddib Halyeeyga Liverpool Jamie Carragher oo ka hadlayay tartanka horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka cusub ayaa wuxuu yiri:
“Haddii aynaan dhameystirin saxiixa heshiis kale, waxaa laga yaabaa inay adkaato inaan Manchester City ka saarno meesha ugu sarreysa, oo sidoo kale yaan la iloobin kooxaha Chelsea iyo Manchester United.”
“Waxaan jeclaan lahaa inaan arko ciyaaryahan goolal dhalin kara, ha ahaato khadka dhexe ama seddexda hore, wax yar ayaan ka walwalsanahay Liverpool tan iyo xilli ciyaareedkii hore, haddii ay jiraan goolal ku filan kooxda si ay ugu guuleystaan koob.”